Anandamide VS CBD: Iza amin'ireo no tsara kokoa amin'ny fahasalamanao?
Home > Anandamide VS CBD: Iza amin'ireo no tsara kokoa amin'ny fahasalamanao? Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba azy ireo!
Anandamide VS CBD: Iza amin'ireo no tsara kokoa amin'ny fahasalamanao? Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba azy ireo!
Inona ny Anandamide (AEA)
Anandamide (AEA), fantatra koa amin'ny hoe molekiola fahasambarana, na N-arachidonoylethanolamine (AEA), dia neurotransmitter asidra matavy. Ny anarana Anadamida (AEA) dia nalaina avy amin'ny Sanskrit of Joy “Ananda.” Raphael Mechoulam no namorona ny teny. Ny fomba, niaraka tamin'ny mpanampy azy roa, WA Devane sy Lumír Hanuš, no nahitana voalohany ny “Anandamide” tamin'ny taona 1992. Anandamide (AEA) dia fanamboarana lehibe ho an'ny olantsika ara-batana sy ara-tsaina betsaka.
Cannabidiol (CBD) no singa faharoa miasa betsaka indrindra antsoina hoe cannabinoids hita ao amin'ny cannabis sativa (marijuana na hemp). Tetrahydrocannabinol (THC) no cannabinoid malaza indrindra ary koa psychoactive cannabinoid hita ao amin'ny orinasa rongony. THC dia mifandray amin'ny fahazoana fahatsapana "avo".
Na izany aza, tsy psychoactive ny CBD ary avy amin'ny zavamaniry hemp izay misy THC kely. Ity fananana ity dia nahatonga ny CBD hahazo laza eo amin'ny sehatry ny fahasalamana sy fahasalamana.
Ny menaka Cannabidiol (CBD) etsy ankilany dia azo avy amin'ny zavamaniry rongony amin'ny alàlan'ny fampidirana ny CBD alaina amin'ny menaka mpitondra toy ny menaka voa hemp na menaka voanio.
FAQ Anandamide & Cannabidiol
Inona ny Anandamide?
Anandamide, fantatra ihany koa amin'ny hoe N-arachidonoylethanolamine, dia neurotransmitter asidra matavy azo avy amin'ny tsy fihanaky ny otrikaina asidra eicosatetraenoic, asidra matavy omega-6 tena ilaina. Ny anarana dia nalaina avy amin'ny teny Sanskrit ananda, izay midika hoe "fifaliana, fahasambarana, fifaliana", ary amide.
Hormonina ve ny anandamide?
Ny fikarohana dia manome ny rohy voalohany eo amin'ny oxytocine - nantsoina hoe "hormonina fitiavana" - sy anandamide, izay nantsoina hoe "molekiola fifaliana" noho ny anjara asany amin'ny fampandehanana ireo mpitsabo sela cannabinoid ao amin'ny selan'ny ati-doha mba hampitomboana ny antony manosika sy fahasambarana.
Mampientanentana ve ny anandamide?
Ho famaranana, ny mpandray cannabinoid an'ny karazana CB1 ary koa ny ligand endogeneous, anandamide, dia voarohirohy amin'ny fifehezana ny hafanam-po amin'ny neuronal, ka mampihena ny neurotransmission manaitaitra amin'ny toerana presynaptic, rafitra iray izay mety tafiditra amin'ny fisorohana ny fientanentanana tafahoatra mankany .
Inona ireo endocannabinoids roa be fikarohana indrindra izay novokarin'ny vatana?
Ny mpikaroka dia manombatombana fa mety misy receptor fahatelo cannabinoid miandry ny hahitana azy. Ny endocannabinoids dia singa voajanahary amin'ny vatantsika hanentanana ireo mpandray ireo. Ireo roa molekiola tena takatra tsara dia antsoina hoe anandamide sy 2-arachidonoylglycerol (2-AG).
Manana rafitra cannabinoid ve ny vatan'olombelona?
Ny rafitra cannabinoid endogenous - voatondro ho an'ny zavamaniry izay nanjary nahitana azy - dia iray amin'ireo rafitra fisiolojika manan-danja indrindra amin'ny fametrahana sy fitazonana ny fahasalaman'ny olombelona. Ny endocannabinoids sy ny mpandray azy dia hita manerana ny vatana: ao amin'ny ati-doha, taova, sela mampitohy, fihary ao, ary sela miaro tena.
Inona no cannabinoid voalohany hita?
Tamin'ny 1992, natokana ho an'ny laboratoara Mechoulam ny endocannabinoid voalohany: molekiola iray izay voasokajy ho agonista ampahany amin'ny mpandray CB1. Izy io dia nanondro azy ho etanolamide arachidonoyl ary nomena anandamide.
Ny anandamide dia sôkôla?
THC, na izany aza, tsy hita amin'ny sôkôla. Fa kosa, simika iray hafa, neurotransmitter antsoina hoe anandamide, dia natokana tao anaty sôkôla. Mahaliana fa ny anandamide dia novokarina voajanahary ao amin'ny ati-doha.
Cannabinoid ve ny sôkôla?
Anandamide dia antsoina hoe endocannabinoid satria ny vatantsika no manao azy ary maka tahaka ny cannabinoids hita ao amin'ny zavamaniry marijuana. Noho izany, ny singa iray amin'ny sôkôla ary ny singa iray ao amin'ny zavamaniry marijuana dia samy afaka manentana ny rafitry ny neurotransmitter marijuana an'ny atidohantsika.
Manana theobromine ve ny sôkôla?
Theobromine no alkaloid voalohany hita ao amin'ny kakaô sy sôkôla. Ny vovoka kakao dia mety miovaova amin'ny haben'ny theobromine, manomboka amin'ny 2% theobromine, ka hatramin'ny ambaratonga avo kokoa manodidina ny 10%. … Matetika misy fifantohana avo kokoa amin'ny maizina raha oharina amin'ny sôkôla ronono.
Inona avy ireo cannabinoïde mahazatra indrindra?
Ny cannabinoid roa lehibe dia ny delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) sy cannabidiol (CBD). Ny be mpahalala indrindra amin'ny roa dia ny delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), izay simika izay tompon'andraikitra amin'ny vokatra psychoactive an'ny rongony.
Inona ny molekiola fahasambarana?
Anandamide dia simika atidoha tsy dia fantatra loatra izay nantsoina hoe "molekiola fifaliana" amin'ny anjara asany amin'ny famoronana fahatsapana fahasambarana. … Izy io dia miasa amin'ny famehezana ireo receptorer ao amin'ny ati-doha ho toy ny fitambarana psychoactive lehibe amin'ny rongony.
Ny anandamide dia zava-mahadomelina?
Anandamide, ligandy endogenous ho an'ny receptor CB1 cannabinoid CB9, dia miteraka vokatra maro amin'ny fitondran-tena mitovy amin'ny ΔXNUMX-tetrahydrocannabinol (THC), singa psychoactive lehibe amin'ny rongony.
Mamokatra cannabinoids ve ny vatan'olombelona?
Endocannabinoids. Endocannabinoids, antsoina koa hoe cannabinoids endogenous, dia molekiola vita amin'ny vatanao. Izy ireo dia mitovy amin'ny cannabinoids, saingy ny vatanao no mamokatra.
Mampitombo ny dopamine ve ny CBD?
Ny CBD koa dia manentana ny receptor adenosine hamporisika ny famotsorana ireo neurotransmitters glutamate sy dopamine. Amin'ny alàlan'ny fifandraisany amin'ireo mpitsabo dopamine, dia manampy amin'ny fampiakarana ny haavon'ny dopamine izany ary hifehezana ny fahalalana, ny antony manosika ary ny fitadiavana valisoa.
Mampitombo ny dopamine ve i Indica?
mampihena ny fanaintainana mafy. mampitombo ny fahazotoan-komana. mampitombo ny dopamine (neurotransmitter izay manampy amin'ny fifehezana ny valisoa sy ny foibem-pifaliana ao amin'ny ati-doha) amin'ny fampiasana alina.
Inona no karazana rongony?
Ankoatry ny siramamy, ny sôkôla dia manana fanafody neuroactive roa hafa koa, kafeinina ary theobromine. Ny sôkôla dia tsy mandrisika ireo mpandray fanafody opiate ao anaty ati-doha fotsiny, fa miteraka famoahana ireo neurochemicals ao amin'ireo ivon'ny fahafinaretan'ny ati-doha.
Inona no ataon'ny anandamide amin'ny vatana?
Ny vatanay dia mamorona anandamide on-demand, ampiasaina raha ilaina mba hitazomana ny homeostasis. Anandamide dia manao izany amin'ny alàlan'ny fanampiana mifehy ny fivontosana sy ny famantarana ny neuron. Satria noforonina izy io, dia mamatotra voalohany indrindra amin'ireo mpandray antsika cannabinoid CB1 sy CB2, toy ny cannabinoids toy ny THC rehefa mihinana.
Inona ny rafitry ny receptor cannabinoid?
Ireo mpitsabo Cannabinoid, izay miorina manerana ny vatana, dia ampahany amin'ny rafitra endocannabinoid, izay tafiditra ao anatin'ny fomba fizolojika isan-karazany ao anatin'izany ny fahazotoan-komana, fahatsapana fanaintainana, fahatsapana ary fahatsiarovana. Ny receptor Cannabinoid dia kilasin'ny mpanome sela membrane ao amin'ny superfamily receptor proteinina G.
Inona avy ireo vondrona samihafa miasa ao amin'ny anandamide?
Ny vondrona Anandamide dia misy amida, ester, ary ether an'ny asidra matavy polyunsaturated lava, ary mizara ny fivarotam-panafody kritika amin'ny D-9-tetrahydrocannabinol (THC).
Ahoana no hampitomboanao ny haavon'ny anandamide voajanahary?
Mihinana sakafo manan-karena amin'ireto voankazo ireto ary atsaharo ny famokarana FAAH izay mampitombo ny haavon'ny anandamide anao! Ny sôkôla dia sakafo iray hafa izay afaka manampy amin'ny fanamafisana ny anandamide. Izy io dia misy fitambarana fantatra amin'ny hoe ethylenediamine izay manakana ny famokarana FAAH. Ataovy ao an-tsaina ireo sakafo telo ireo amin'ny fotoana manaraka hidiranao ao amin'ny supermarket.
Misy anandamide ve ny sôkôla?
Zava-mahadomelina ve ny sôkôla?
Ny sôkôla dia manana siramamy betsaka. Ankoatry ny siramamy, ny sôkôla dia manana fanafody neuroactive roa hafa koa, kafeinina ary theobromine. Ny sôkôla dia tsy mandrisika ireo mpandray fanafody opiate ao anaty ati-doha fotsiny, fa miteraka famoahana ireo neurochemicals ao amin'ireo ivon-toeran'ny ati-doha.
Inona ny fanafody amin'ny sôkôla?
Theobromine no alkaloid voalohany hita ao amin'ny kakaô sy sôkôla.
Inona no simika misy amin'ny sôkôla?
Theobromine, fantatra taloha amin'ny anarana hoe xantheose, dia alkaloid mangidy amin'ny zavamaniry kakaao, miaraka amin'ny formula kimia C7H8N4O2. Hita ao amin'ny sôkôla izy io, ary koa amin'ny sakafo maro hafa, ao anatin'izany ny ravin'ny zavamaniry dite, sy ny voanjo kola.
Mampitombo ny serotonine ve ny sôkôla?
Na izany aza, satria ny sôkôla dia misy tryptophan, ny fiakaran'ny serotonin azo dia afaka manampy amin'ny fanazavana ny antony mety hahatsapana fahasambarana, fahatoniana, na tsy fitebitebena aorian'ny fihinanana sombin'ny mofomamy sôkôlà (Serotonin).
Inona no tompon'andraikitra amin'ny anandamide?
Anandamide dia mitana andraikitra amin'ny fifehezana ny fitondran-tena amin'ny famahanana, ary ny fitomboan'ny fientanam-po sy ny fahafinaretana. Anandamide nampidirina mivantana tao amin'ny ati-doha mifototra amin'ny valisoa forebrain accumbens dia manatsara ny valiny mahafinaritra an'ny voalavo amin'ny tsiro sukrosa manome valisoa, ary manatsara ny fihinanana sakafo koa.
Antioksida ve ny CBD?
THC sy CBD dia antioxidant mahery - mahery vaika kokoa noho ny vitamina C sy E. Raha ny tena izy, ny governemanta amerikana patanty 1999/008769 dia natao manokana ho an'ny neuroprotectant sy anti-oxidant an'ny cannabinoids.
Inona no ataon'ny anzima FAAH?
Hydride hydrolase amide hydratase (FAAH) dia anzima membrane integral membrane izay manimba ny fianakavian'ny asidra amide an'ny lipida famantarana endogenous, izay misy ny anandamide cannabinoid endogenous ary ny oleamide entin'ny torimaso.
Inona no fiantraikan'ny CBD amin'ny anandamide?
Ny fandinihana biolojika dia manondro fa ny cannabidiol dia mety hanatsara ny fanaovan-tsoa anandamide endogenous amin'ny alàlan'ny fanakanana ny fahasimban'ny intraselular anandamide izay nopihan'ny asidra amida hydrolase (FAAH).
Inona no dikan'ny cannabinoid?
Ny teny hoe cannabinoid dia manondro ny zavatra simika rehetra, na inona na inona firafitra na fiaviany, izay manatevin-daharana ireo mpitsabo sela sy ny ati-doha ary misy vokany mitovy amin'ireo novokarin'ny orinasa Cannabis Sativa. … Ny cannabinoid roa lehibe dia ny delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) sy cannabidiol (CBD).
Inona ny rafitra endocannabinoid ary inona no ataony?
Ny vatan'olombelona dia misy rafitra manokana antsoina hoe ny rafitra endocannabinoid (ECS), izay tafiditra amin'ny fandrindrana asa isan-karazany ao anatin'izany ny torimaso, ny fahazotoan-komana, ny fanaintainana ary ny valin'ny hery fiarovan'ny vatana.
Manana receptor cannabinoid ve ny vatana?
Ireo mpitsabo Cannabinoid, izay miorina manerana ny vatana, dia ampahany amin'ny rafitra endocannabinoid, izay tafiditra ao anatin'ny fomba fizolojika isan-karazany ao anatin'izany ny fahazotoan-komana, fahatsapana fanaintainana, fahatsapana ary fahatsiarovana. … Tamin'ny 2007, nofaritana ny famehezana ny cannabinoïde marobe amin'ny receptor G proteinina G ao amin'ny ati-doha.
Mampitombo ny anandamide ve ny CBD?
Raha ny vokatra azo avy amin'ny cannabinoid receptor-dependant an'ny CBD momba ny lalàna mifehy ny tahotra voalaza etsy ambony dia mampitombo ny haavon'ny anandamide ny CBD amin'ny alàlan'ny fanakanana ny fiverenan'ny mpanelanelana sy ny fahasimban'ny FAAH.
Iza no cannabinoid ampiasaina amin'ny fitaintainanana?
Miaraka amin'ny fatra ambany THC ary fatra antonony an'ny CBD, ny profil cannabinoid an'i Harlequin dia mifanaraka tsara amin'ireo mpiady amin'ny tebiteby izay tsy miraharaha ny euphoria malefaka. Ny terpene be indrindra dia ny myrcene, izay inoana fa misy vokany miala sasatra ary nampiasaina nandritra ny tantara ho fanampiana amin'ny torimaso.
Manampy ny fitaintainanana ve ny CBD?
Ny CBD dia matetika ampiasaina hiatrehana ny fitaintainanana, ary ho an'ireo marary mijaly amin'ny tsy fahitan-tory, dia asehon'ny fandinihana fa mety hanampy amin'ny torimaso sy ny torimaso hatrany ny CBD. CBD dia mety manolotra safidy amin'ny fitsaboana karazana fanaintainana mitaiza.
Manampy amin'ny fanahiana ve ny alikaola?
Ny alikaola dia fanafody mampitony sy mahakivy izay misy fiantraikany amin'ny rafi-pitatitra foibe. Amin'ny voalohany, ny fisotroana dia mety hampihena ny tahotra ary hampiala ny sainao amin'ireo zava-manahirana anao. Izy io dia afaka manampy anao hahatsapa ho tsy saro-kenatra kokoa, hanomezana aingam-panahy anao ary hahatonga anao hahatsapa ho tony amin'ny ankapobeny.
Ahoana no hahitako fa marary aho?
Mba hamaritana ny aretina iray amin'ny tebiteby, ny dokotera dia manao fanadinana ara-batana, manontany ny momba ireo soritr'aretinao, ary manolo-kevitra ny fizahana rà, izay manampy ny dokotera hamantatra raha misy aretina hafa, toy ny hypothyroidism, mety hiteraka soritr'aretinao. Mety hanontany momba ny fanafody raisinao koa ny dokotera.
Inona no fanafody tsy tokony hosotroina amin'ny CBD?
Antidepressants (toy ny fluoxetine, na Prozac)
Fanafody mety hiteraka torimaso (antipsychotics, benzodiazepines)
Antibiotika Macrolide (erythromycin, clarithromycin)
Fanafody fo (mpanakan-tsiranoka kalsioma sasany)
Mamoaka dopamine ve ny CBD?
Inona no tsapan'ny dopamine ambany?
Ny fambara sy ny soritr'aretina sasany mifandraika amin'ny tsy fahampian'ny dopamine dia misy: kombo, hozatra, na hozongozona. fanaintainana sy fanaintainana. henjana amin'ny hozatra.
Miakatra ve ny kafeinina?
Ny kafeinina, ny psychoactive be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao, dia ampiasaina hampiroborobo ny fahatairana ary hanatsara ny fahamailoana. Toy ny zava-mahadomelina mampiroborobo hafa (stimulants sy modafinil), ny kafeinina dia manatsara ny famantarana ny dopamine (DA) ao amin'ny ati-doha, izay ampiasain'ny mpanohitra adenosine A2A (A2AR).
Inona no fomba haingana indrindra hampitomboana ny dopamine?
Mihinana Proteinina Be dia be
Mihinàna tavy tsy dia mahavoky firy
Mihinana tsaramaso volo
Alao ny tara-pahazavana
Diniho ny fanampiana
Miakatra serotonine ve ny CBD?
Ny CBD dia tsy voatery hampisondrotra ny haavon'ny serotoninina, fa mety hisy fiantraikany amin'ny fandraisan'ny mpandray ny simika ny ati-doha ny serotonin izay efa ao anatin'ny rafitrao. Ny fandinihana biby tamin'ny 2014 dia nahatsikaritra fa ny vokatry ny CBD tamin'ireto receptorer ao amin'ny ati-doha ireto dia niteraka vokatra antidepresy sy fanoherana ny tebiteby.
Afaka manampy ny atidohanao ve ny CBD?
Mino ny mpikaroka fa ny fahafahan'ny CBD mihetsika amin'ny rafitra endocannabinoid sy ny rafitra fanaovana sonia amin'ny ati-doha hafa dia mety hanome tombony ho an'ireo manana aretin-tsaina. Raha ny marina dia iray amin'ny fampiasana be mpampiasa indrindra ny CBD ny fitsaboana ny aretin-kozatra toy ny androbe sy ny sclerose maro.
Ahoana no ahafahako mampiakatra ny haavon'ny serotonin?
Inona ny menaka CBD tsara indrindra vidiana amin'ny fihenan'ny lanja?
Anandamide dia mpanelanelana amin'ny lipida izay miasa toy ny ligandy endogenous an'ny mpandray CB1. Ireo mpandray ireo koa dia lasibatra molekiola voalohany tompon'andraikitra amin'ny vokatra ara-panafody Δ9-tetrahydrocannabinol, singa psychoactive ao amin'ny Cannabis sativa.
Ahoana no anaovanao anandamide?
Izy io dia namboarina avy amin'ny N-arachidonoyl phosphatidylethanolamine amin'ny alàlan'ny làlana maro. Izy io dia simba indrindra amin'ny alàlan'ny anzima matavy amide hydrolase (FAAH), izay manova anandamide ho etanolamine sy arachidonic acid.
Mamokatra CBD ve ny vatan'olombelona?
Ny mety tsy ho tsapanao kosa dia ity dia avy amin'ny zava-misy fa ny vatan'olombelona dia mamokatra cannabinoïd endogenous azy manokana: fitoviana voajanahary amin'ny fitambarana hita ao amin'ny zavamaniry rongony, toy ny THC (tetrahydrocannabinol) sy CBD (cannabidiol).
Tena tsara ve ny CBD?
Tsy misy porofo, ohatra, fa manasitrana homamiadana ny CBD. Misy porofo antonony fa ny CBD dia afaka manatsara ny aretin-torimaso, ny fanaintainan'ny fibromyalgia, ny spasticity hozatra mifandraika amin'ny sclerosis marobe, ary ny fitaintainanana. "Ny tombony lehibe hitako tamin'ny dokotera dia ny fitsaboana ny aretin-torimaso, ny fanahiana ary ny fanaintainana," hoy ny Dr. Levy.
Azo antoka ve ny vokatra CBD?
Ny fampiasana CBD dia mitaky risika ihany koa. Na dia zaka tsara aza izany, ny CBD dia mety miteraka voka-dratsy, toy ny vava maina, fivalanana, fihenan-tsakafo, torimaso ary havizanana. Ny CBD koa dia afaka mifanerasera amin'ny fanafody hafa raisinao, toy ny manify ra.
Inona no ataon'ny CBD amin'ny ati-doha?
Ireo toetra ireo dia mifandraika amin'ny fahafahan'ny CBD mihetsika amin'ny mpandray ny ati-doha ho an'ny serotonin, neurotransmitter izay mifehy ny toe-po sy ny fihetsika ara-tsosialy. Famintinana Ny fampiasana CBD dia naseho mba hampihenana ny tebiteby sy ny fahaketrahana amin'ny fianaran'ny olombelona sy ny biby.
Haingana toy inona ny fandaozan'ny CBD ny rafitra?
Matetika ny CBD dia mijanona ao amin'ny rafitrao mandritra ny 2 ka hatramin'ny 5 andro, saingy tsy mihatra amin'ny olon-drehetra izany. Ho an'ny sasany, ny CBD dia afaka mijanona ao amin'ny rafitr'izy ireo mandritra ny herinandro maro.
Aiza no misy anandamide?
Anandamide dia synthesized anzimazika amin'ny sehatry ny ati-doha izay zava-dehibe amin'ny fahatsiarovana, ny fizotran'ny eritreritra ary ny fifehezana ny hetsika. Ny fikarohana dia manolo-kevitra fa ny anandamide dia mandray anjara amin'ny fanaovana sy ny fanapahana ny fifandraisana akaiky eo amin'ny sela nerveuse, ary izany dia mifandraika amin'ny fianarana sy fahatsiarovana.
Anandamide ve cannabinoid?
Antsoina koa N-arachidonoylethanolamine (AEA), ny anandamide dia mifanerasera amin'ny receptor CB an'ny vatana mitovy amin'ny cannabinoids toy ny THC. Izy io dia mpamatsy neurotransmitter sy receptor cannabinoid-receptor izay miasa ho toy ny signal messenger ho an'ny receptor CB izay miorina ao amin'ny vatana.
(1) .Mallet PE, Beninger RJ (1996). "Ilay endagonous cannabinoid receptor agonist anandamide dia manimba ny fahatsiarovana amin'ny voalavo". Farmakolojia fitondran-tena. 7 (3): 276–284
(2) .Mechoulam R, Fride E (1995). "Ny lalana tsy voarasa mankamin'ny ligandinan'ny cannabinoid atidoha, ny anandamides". Ao amin'ny Pertwee RG (ed.). Mpandray mpandray Cannabinoid. Boston: Gazety akademika. p. 233–
(3) .Rapino, C.; Battista, N. Bari, M. Maccarrone, M. (2014). "Endocannabinoids amin'ny maha biomarker ny fiterahana ny olombelona". Fanavaozana ny famokarana olombelona. 20 (4): 501–516.
(4).(2015). Cannabidiol (CBD) sy ny analogie: famerenana ny vokany amin'ny fivontosana. Simia biolojika sy biolojika, 23 (7), 1377-1385.
(5) .Corroon, J., & Phillips, JA (2018). Fandinihana iraisan'ny mpisera Cannabidiol. Fikarohana rongony sy cannabinoid, 3 (1), 152-161.
(6).National Center for Biotechnology Information (2020). Famintinana ny PubChem amin'ny CID 644019, Cannabidiol. Hita tamin'ny 27 Oktobra 2020, avy amin'ny .
(7) .R de Mello Schier, A., P de Oliveira Ribeiro, N., S Coutinho, D., Machado, S., Arias-Carrión, O., A Crippa, J.,… & C Silva, A . (2014). Vokatry ny cannabidiol toy ny antidepressant sy ny fihenjanana toy ny cannabidiol: fitambarana simika an'ny Cannabis sativa. CNS & aretina Neurological-kendrena zava-mahadomelina (kendrena zava-mahadomelina ankehitriny-CNS & aretina Neurological), 13 (6), 953-960.
(8) .Blessing, EM, Steenkamp, ​​MM, Manzanares, J., & Marmar, CR (2015). Cannabidiol ho toy ny fitsaboana mety amin'ny aretina mitebiteby. Neurotherapeutics: ny diarin'ny Fikambanana Amerikanina ho an'ny NeuroTherapeutics fanandramana, 12(4), 825-836.
(11).Oleoylethanolamide (oea) - ilay wand mahagaga amin'ny fiainanao
(12).Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny nikôtinamid riboside chloride.
(13).Fanampiny magnesium l-threonate: tombontsoa, ​​fatra, ary vokany hafa.
(14).Palmitoylethanolamide (pea): tombony, fatra, fampiasana, famenony.
(15).Tombontsoa lehibe 6 ho an'ny fahasalamana amin'ny famenon-tsakafo resveratrol.
(16).Tombony 5 be indrindra amin'ny fihinanana phosphatidylserine (ps).
(17).Tombony 5 ambony amin'ny fihinanana quinone pyrroloquinoline (pqq).
(18).Ny famenon-tsakafo nootropic tsara indrindra an'ny alpha gpc.
(19).Ny famenon-tsakafo tsara indrindra ho an'ny monotucleotide nicotinamide (nmn).
Ny Anandamide amin'ny sôkôla dia mety ho voadoka, saingy rava haingana be ka tsy misy ilana azy.
Ny fatra ant Anidideide fatra mavitrika dia nampandeha ny CB1 hampihenana ny fihetsika sahotaka. Saingy amin'ny fatra avo lenta, ny anandamide dia nanomboka nanetsika ny fantsona ion TRPV1, izay nanohitra ny vokatry ny tebiteby anandamide.
Ity dia antsoina hoe valin'ny doka "biphasic" na "miendrika U".
Ny Anandamide dia novokarina tao amin'ny vatantsika raha THC sy CBD kosa dia novokarina tamin'ny zavamaniry.
Anandamide dia miasa am-bava.
Ny te-hilaza fotsiny ny lahatsoratrao dia nahagaga. Ny mazava ao amin'ny lahatsoranao dia milay fotsiny ary afaka mieritreritra aho fa manam-pahaizana amin'ity lohahevitra ity ianao. Miaraka amin'ny fahazoan-dàlana aminao, avelao aho hihazona ny fahana RSS-nao mba hitazomana ny daty miaraka amin'ny lahatsoratra akaiky. Misaotra an-tapitrisany ary tohizo ny asa mahafaly.
Ny CBD dia manakana ny FHAA tsy handrava ny Anandamide izay manampy amin'ny fihenan'ny fitaintainanana lehibe ary koa ny fihenan'ny fivontosan'ny vatana.
Namaky zavatra vitsivitsy milaza zava-mahasambatra avy amin'ny Anandamide aho, namaky koa aho fa nisy olona naka fitrandrahana Theobroma Caocao ary nisy vokany tamim-pifaliana. Angamba hijery izany aho amin'izay.
Misy mpandray cannabinoid roa misaraka ao amin'ny vatana: CB1 sy CB2. THC dia miasa ho agonista amin'ny CB1 izay miteraka fanafoanana ny dopamine.
THC sy CBD dia samy phytocannabinoids, fa ny anandamide dia cannabinoid endogenous (novokarin'ny vatantsika)
Rehefa mifatotra amin'ny CB1 ny THC dia mampihetsika ny receptor G-Protein Coupled izay hampihetsika ny anzima sy / na ny messenger faharoa. Ny vokatr'ireto GPCR ireto dia miteraka vokatra maro, toy ny fanoherana ny maloiloy, fitoniana ary ny fanaintainana.
Mety hanampy amin'ny fieritreretana azy io ho toy ny fitaovana Rube Goldberg - THC mamatotra ny receptor CB1, izay mampihetsika ny GPCR, izay mampihetsika mekanisma maro hafa.
Manana receptor cannabinoid, mpandray CB1 ary CB2 izahay mba ho marimarina. Ireo mpandray CB1 aorian'ny fampahavitrihana, na endocannabinoids voajanahary na syntetika na mitranga voajanahary, dia manakana ireo mpitondra hafatra simika maro. Ny iray amin'ireny dia ny neurotransmitter GABA, izay manakana ny famotsorana ny dopamine, manome anao ampahany amin'ny avo izay tsapanao amin'ny tsimparifary. Misy cannabinoids an-jatony izay afaka mampihetsika ireo mpandray reseptor roa ireo, ary misy mpandray reseptorna vitsivitsy izay mbola tsy nodinihina tsara fa maro koa ny cannabinoids manana fifandraisana akaiky.